Umaki: imigqa yezihloko | Martech Zone
Maka: imigqa yezihloko
IDigital Third Coast isebenze neReachmail ukukhomba isimilo esibi kakhulu nemikhuba emibi kakhulu ekhonjiswe ngabathengisi be-imeyili. I-infographic abayiklamile ixhumanisa isimilo ngasinye nomlingiswa wesiko le-pop ongalibaleki ukusiza abathengisi ukuthi bakhumbule futhi bahlobanise imikhuba emibi. Baphinde bafaka izeluleko ezisebenzayo zokuguqula ukungaziphathi kahle kube kuhle. Ngeshwa, akuwona wonke umuntu ophethe amathuluzi wokuthengisa we-imeyili awasebenzisa kahle. Kungenzeka ngokuphelele ukuthi wenza eyodwa noma eziningi
Imikhuba Engcono Kakhulu Yokufinyelela I-imeyili Kubathonya
NgeSonto, uDisemba 13, i-2015 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Njengoba sigxunyekwa ochwepheshe bezobudlelwano bomphakathi nsuku zonke, sithola ukubona izindawo ezinhle kakhulu nezimbi kakhulu zokufinyelela ama-imeyili. Sihlanganyele ngaphambilini ukuthi singabhala kanjani i-pitch esebenzayo futhi le infographic ingukulandelela okuhle okubandakanya inqubekela phambili enkulu. Iqiniso ngukuthi izinkampani zidinga ukwakha ukuqwashisa negunya lomkhiqizo wazo online. Ukubhala okuqukethwe akusenele, amandla wokufaka okuqukethwe okuhle futhi akwabelane ngakho
Amathiphu ama-3 Wokwenza i-imeyili Elungele Ukuhamba
NgoMsombuluko, Februwari 20, 2012 NgoLwesithathu, Februwari 15, 2012 Ithempeli laseLavon
Ngaphambi kokuthi uqale unqume ukuthi ungayakha kanjani i-imeyili elungele ukuhamba nomakhalekhukhwini, kufanele uzibuze ukuthi “Abamukeli bakho basebenzisani ukubuka i-imeyili yakho?” uma unquma ukuthi kunesidingo se-imeyili elungiselelwe iselula, yisikhathi sokuqala ukucabanga ukuthi ungayidala kanjani. Nawa amanye amathiphu wokwenza ama-imeyili alungele amaselula emikhankaso yakho ye-imeyili. Imigqa Yesifundo. Amadivayisi eselula athanda ukusika imigqa yezihloko ze-imeyili
NgoLwesibili, Novemba 22, 2011 NgoLwesibili, Novemba 22, 2011 Douglas Karr
Okungenani kanye noma kabili ngeviki, ngithola i-imeyili eklanywe ngobuhlakani, enziwe ibe ngumuntu, futhi anginalo noluncane ulwazi lokuthi kungani ngithola i-imeyili noma inkampani eyithumele. Kuhamba into enjengale: Kusuka ku: [Umkhiqizo] Isihloko: [Umkhiqizo] Inguqulo 2 Ikhishwe! Sawubona [Umkhiqizo] Umsebenzisi! Sisebenze kanzima ezinyangeni ezimbalwa ezedlule sakha kabusha [umkhiqizo]. Sekunesikhathi singakuboni futhi kube nezinguquko ezithile, ngakho-ke
ULwesine, May 19, 2011 NgoLwesine, July 10, 2014 Douglas Karr
Indlela elula yokuthola ama-imeyili akho aqonde ngqo kufolda ye-SPAM amagama asetshenziswe kulayini wakho wesihloko. I-SpamAssassin wuhlelo lokusebenza oluvimba ugaxekile oluvula imithombo olushicilela imithetho yabo yokuhlonza i-SPAM ku-Wiki yabo. Nayi imithetho iSpamAssassin isebenzisa ngamagama kulayini wesihloko: Umugqa wesihloko awunalutho (Ngiyabonga Alan!) Isihloko siqukethe amagama aphaphile, impendulo, usizo, isiphakamiso, impendulo, isexwayiso, isaziso, ukubingelela, udaba, udumo, ukweleta, ukweleta,